Mucaaridka iyo Dowladda Soomaaliland oo heshiis weyn kala saxeexday - Awdinle Online
Mucaaridka iyo Dowladda Soomaaliland oo heshiis weyn kala saxeexday
February 27, 2020 (Awdinle Online) ― Mucaaridka iyo Muuse Biixi ayaa maanta kulan xasaasi ah ku yeeshay Madaxtooyada Somaliland, kaasi oo xal looga gaarayay khilaafka sii xoogeystay ee doorashooyinka.
Kulankaasi oo muddo saacadaha ah qaatay ayaa waxa lagaga wada-hadlay sidii xal waara looga gaari lahaa khilaafka soo noq-noqday ee arrimaha doorashooyinka, isla markaana labada dhinac ay u damin lahaayen xiisada.
Waxaana kulankaasi door weyn ku lahaa qabsoomida, oo qeybna ka ahaa Wafdi uu hogaaminayey Nicolas Berlanga oo ka socday Midowga yurub, kuwaasi oo labada dhinac cadaadis xoogan ku saaray in xal kama dambeysa ah laga gaaro khilaafkaasi.
Xisbiyada mucaaridka ah ee Waddani iyo Ucid, iyo weliba Madaxweyne Biixi ku gaareen heshiis lagu soo afjarayo xiisada ka dhalatay arrimaha doorashooyinka, sida uu sheegay Xoghayaha xisbiga mucaaridka ah ee Ucid.
1. In la qabto doorashada waqtigeeda oo ah marka la gaaro dhamaadka sanadkan 2020
2. In doorashooyinkaasi aysan qaban Guddiga la isku khilaafsan yahay balse lagu wareejiyo guddigii hore ee doorashada, oo ay wehlinayaan saddex xubnood oo matala beesha caalamka.
Isku imaatinkan ayaa waxa uu ku soo aadaya xili ay xisbiyada mucaaridka ay ku baaqeen in xil ka xayuubin lagu sameeyo Madaxweyne Muuse Biixi, isla markaana la qabto doorashada madaxtinimada, maadama uu ku fashilmay hogaaminta Somaliland.
Hoos ka aqriso heshiiska oo dhameystiran:
Previous articleQaar ka mid ah Shacabka ku nool Dhuusamareeb oo cadaalad u raadsaday Al-Shabaab
Next articleSoomaaliya oo ku dhowaaqday talaabooyin ka dhan ah faro-gelinta Kenya